Vaovao - Teknolojia famokarana palitao
Araka ny lamba
Ao amin'ny fiarahamonina maoderina, palitao orana vita amin'ny sarimihetsika plastika na akanjo orana voatsabo matetika no ampiasaina. Ny akanjo orana toy izany dia manana tombony amin'ny fanaovana azy mora, maivana sy malefaka, loko isan-karazany ary vidiny ambany . Amin'ny fiainana andavanandro, misy karazana lamba palitao isan-karazany, toy ny nilon'Offords, lamba firakotra, lamba polyester, PTFF (polytetrafluoroethylene), lamba Gore-Tex, sns. .
Lakaoly: Ny lakaoky ny akanjo lava dia apetaka amin'ny lamba landy, izay malefaka sy matevina ary somary mafy orina.
Tarpaulin: akanjo roa, fampisehoana tsy tantera-drano no tsara, fa mora vovoka kosa.
Plastika: palitao mora entina, mahazaka fanoherana tsara ny rano, mora vidy, nefa tsy maharitra fiainana.
Oxford lamba: ny lamba vita amin'ny fomba fanenomana manokana amin'ny fibre vita amin'ny landihazo na polyester dia mora hosasana, maina vetivety, malefaka amin'ny tanana, mora mandray ny hamandoana, miloko lamba malemilemy, vatana lamba malefaka, azo fehezina ny rivotra, mahazo aina, roa -y vokany loko sy toetra hafa.
Lamba mifono: ny atiny anatiny amin'ny lamba dia rakotra fonon-drano tsy misy rano sy hamandoana, toy ny palitao mahazatra ampiasain'ny polisy sy ny tendrombohitra. Ny effet tsy misy rano sy mifoka rivotra dia tsara kokoa, saingy lafo ny vidiny.
Lamba polyester: Ny tombony lehibe indrindra amin'ny lamba dia ny fanoherana ketrona tsara sy ny fihazonana endrika, fa ny fandokoana sy ny hakitroky ny hamandoana.
PTFF (Polytetrafluoroethylene): maivana, ahazoana aina, tsy tantera-drano ary afaka miaina, ary mora vidy. Nampiasaina voalohany tamin'ny famokarana fanamiana miaramila, akanjo fiarovana, avy eo ampiasaina amin'ny akanjo fanatanjahan-tena. Ny tranolay sy ny zavatra hafa koa dia fitaovana tena tsara ho an'ny akanjo bioprotective.
Nylon: ny famirapiratry ny vokatra dia tsara kokoa, matanjaka ary mahatohitra ny fitafiana dia tsara, saingy mora ny miova endrika eo ambanin'ny fihetsiky ny hery ivelany, noho izany ny lamba dia mora ketrona amin'ny fizotran'ny fitafy.
Gore-tex: Rivotra tsara, orana, fiononana ary fifindran'ny rivotra, vita amin'ny horonantsary manify sy lamba vita amin'ny lamba avo lenta ary nasiana tombo-kase amin'ny karazana paty vaovao, ka manome fiarovana maharitra maharitra.
Araka ny endriny
Ny fomba fandroana orana dia ahitana indrindra: karazana akanjo, karazana H, habe, karazany, palitao mitaingina bisikileta sns sns, mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny fanatanjahan-tena any ivelany dia samy hafa, mety amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena isan-karazany, mitaingina akanjo mafana indroa, ohatra, akanjo lava amin'ny tanany ny famolavolana firafitra amin'ny zipper, mifototra amin'ny fifanarahana amin'ny firafitry ny vatan'olombelona sy ny fampiononana amin'ny sandry dia mety ho simba. Ny jasman'olon-droa dia azo zaraina ho akanjo mitokana ho an'ny olona tokana, izay azo sarahina haingana raha sendra lozam-pifamoivoizana mandritra ny bisikileta, ka hanatsarana ny fiarovana ireo mpitaingina azy. Amin'ny famolavolana, ny bokotra miafina dia hampiasaina hanonerana ny fahamendrehana sy ny maha-azo ampiharina ny akanjo mando amin'ny fanjakana tokana, ka ny fizarana akanjo dia mizara ho fanjakana tokana ihany koa ary misy vokany tsara orana; Ny collocation miloko mirindra dia tsy vitan'ny manatsara ny fahafinaretana fa manome toky ihany koa fa ny mpandeha bisikileta dia mora jerena amin'ny tranga fahitana ambany, mba hanatsarana ny fiarovana. Noho izany, mavo mavo, mena mena na volomboasary mahery no be mpampiasa kokoa. Ankoatr'izay dia tokony ho mora entina sy mitahiry izy ireo .
Famakafakana ny teknolojia
Raha ny fizotry ny famokarana jasco, ny haitao mahazatra fanjairana orana eto an-tsena dia ny fampiasana zaitra, mahantra ny mitafy aina, tsy afaka misoroka tanteraka ny fidiran'ny orana. Noho izany, ny teknôlôjia fitsaboana hafanana haingam-pandeha PU dia azo ampiasaina hanitarana ny fehikibo famehezana hafanana, izay afaka misoroka tsara ny ranon'orana tsy hiditra ao anaty kofehy pinhole ary hanatsara ny vokatry ny orana orana.